Inqubomgomo Yokubuyisela Imali | WOWOW Faucets-WOWOW Ompompi
Ikhaya / inqubomgomo yokubuyiselwa
Sinenqubomgomo yokubuya kwezinsuku ezingama-30, okusho ukuthi unezinsuku ezingama-30 ngemuva kokuthola into yakho ukucela ukubuyiselwa.
Ukuze ufanelekele ukubuyiselwa, into yakho kufanele ibe sesimweni esifanayo sokuthi uyitholile, ungafundi noma ungasetshenziswanga, enamathegi, nasekuhlanganiseni kwayo kwasekuqaleni. Uzodinga nerisidi noma ubufakazi bokuthenga.
Ukuqala ukubuyisa imali, ungaxhumana nathi ku-serv@wowowfaucet.com. Uma ukubuyisa kwakho kwamukelwa, sizokuthumela ilebuli yokuthumela yokubuyisa, kanye nemiyalo yokuthi ungathumela kanjani futhi kuphi iphasela lakho. Izinto ezithunyelwe kithi ngaphandle kokucela kuqala ukubuyiselwa ngeke zamukelwe.
Ungahlala uthintana nathi nganoma yimuphi umbuzo obuyayo ku- service@wowowfaucet.com.
Sicela uhlole i-oda lakho lapho usamukela futhi usithinte ngokushesha uma into inesici, ilimele noma uma uthola into engalungile, ukuze sikwazi ukuhlola inkinga siyenze kahle.
Ngaphandle / izinto ezingabuyiswa
Izinhlobo ezithile zezinto azikwazi ukubuyiselwa, njengezimpahla ezonakalayo (njengokudla, izimbali, noma izitshalo), imikhiqizo yangokwezifiso (efana nemiyalo ekhethekile noma izinto ezenziwe umuntu), nezimpahla zokunakekelwa komuntu (njengemikhiqizo yobuhle). Futhi asemukeli ukubuyiselwa kwezinto eziyingozi, uketshezi olunokuvutha, noma amagesi. Sicela uxhumane uma unemibuzo noma ukukhathazeka mayelana nento yakho ethile.
Ngeshwa, asikwazi ukwamukela ukubuyiswa kwezinto ezithengiswayo noma amakhadi wesipho.
Indlela esheshayo yokuqinisekisa ukuthi uthola okudingayo ukubuyisela into onayo, futhi uma ukubuyiselwa kwamukelwa, thenga okuhlukile kwento entsha.
Sizokwazisa uma sesitholile futhi sahlola ukubuyisa kwakho, futhi sikwazise ukuthi imali ebuyiselwe ivunyelwe noma cha. Uma kuvunyelwe, uzobuyiselwa ngokuzenzakalelayo indlela yakho yokukhokha yangempela. Uyacelwa ukuthi ukhumbule ukuthi kungathatha isikhathi ukuthi inkampani yakho yasebhange noma yamakhadi wesikweletu icubungule futhi ithumele nokubuyiselwa kwemali.
Uma ukubuyiselwa kubangelwe ngumthengi, umthengi kufanele abhekane nemali yokuthumela. Imali ethize kufanele isuselwe kwinkampani ye-expression oyikhethayo.
Uma kungenxa yezizathu zethu, izimpahla ezitholakele zonakalisiwe noma azilungile, futhi umthengi akufuneki athwale imali yokuthumela ngalesi sizathu.
Ayikho imali yokwenza kabusha ezokhokhiswa kubathengi ngokubuyisa umkhiqizo.